Daawo sawirada munaasabadi lagu caleema saaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxmuud
Updated About:275 days ago 0
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah xilka ugala wareegay madaxweynihi hore Sheekh Sharif Sheekh Axmed kadib munaasabad ka dhacday Muqdisho.
Munaasabada oo ka dhacday Akadeemiyada Booliska ee Janaraal Kaahiye ayaa waxaa xaadir ahaa madax ka kala socotay gobolka iyo wakiilo ka kala socday Beesha Caalamka, waxaa madaxdi joogtay ka mid ahaa Madaxweynaha Jabuuti Ismaacil Cumar Geele, Ra’isulwasaaraha Ethiopia Xeylumaryam Desaleyn, Ra’isulwasaare xigeenka Turkiga Baker Buzdag, Ra’isulwasaare ku xigeenka Uganda Mosas Ali, Wasiiru dowlaha Arimaha dibada Qatar, Madaxa Midowga Afica Jean Bing, Wakiilka Jaamacada Carabta ee Soomaaliya Samir Xusni, iyo wakiilo ka kala socday Un-ka iyo IGAD.
Dhamaan marti sharafka inti ugu muhiimsaneyd way ka hadleen xaflada waxaana ay bogaadiyeen madaxweynaha cusub ee Soomaaliya.
Dadki sida weyn uga hadlay waxaa ka mid ahaa madaxweynihi hore Shariif Sheekh Axmed oo sheegayi n uu dalka wax ugu soo qabtay mudadi uu madaxweynaha ka ahaa Soomaaliya, balse ay tahay shaqo iyo xil aad u culus uusanna qofna wadi karin hadii aanan gacan lasiinin.
Waxa kale oo uu sheegay inuu jeclaa inuu sii ahaado madaxweyne balse uu ku qancay sanduuqa cod bixinta ee baarlamaanka, qof kastaana looga baahanyahay inuu sidaasi u aqbalo.
“Madaxnimo hadii ay macna sameyneyso waa isoo martay waxi aan qaba karana waa soo qabtay, waa jeclaa in aan sii wato laakin sanduuqa codka ayaan ku qancay” ayuu yiri.
Sheekh Shariif oo ay Soomaalida iyo caalamkaba ku amaaneen sidi uu u aqbalay in doorashada loogaga guuleystay ayaa soo hadal qaaday arrintaasi, isaga oo sheegay inuu sidaasi u yeelay si aysan Soomaaliya dib ugu laaban isaguna uu bur buriyo shaqadi uu soo qabtay.
Wuxuu balan qaaday inuu diyaar ula yahay wixi tala ah ee uu soo weydiisto madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud, balse ka codsaday dadka kale in aanan madaxweynaha talooyin lagu wareerin ilaa uu isaga dalbado mooyee.